Heart touching Story-सायद उनि मेरी हुन्थिन भने | Knowledge & Fun Park
HomeLatestHeart touching Story-सायद उनि मेरी हुन्थिन भने
Heart touching Story-सायद उनि मेरी हुन्थिन भने
October 30, 2017 Admin Latest, Nepali Literature, कथा 0
लेखक - विशाल न्यौपाने
भन्न त मलाई love मा interest छैन भन्थी । बिस्तारै बिस्तारै अतीत कोट्याउन थाले । थाहा पाए मैले । ऊ पहिले relation मा बसिसकेकी रहिछे । अनि बिस्तारै उस्लाई कोट्याउन थाले र अन्ततः आफैले सुनाई जुन मलाई लुकाएकी थिई ।
बिचमा भन्न त भनेकी थिई म केही कुरा पछि भन्छु भनेर । तर त्यही बाहाना बनाएर भन्न भ्याई, मेलै तिमीलाई पछि भन्छु भनेकै थिए त । हुन पनि हो । चोखो माया गर्ने भएकोले होला उसलाई माफी दिए ।
अनि हाम्रो बातचित हुदै गयो । म उसँग धेरै नजिकिएको थिए । तर उन्को तर्फबाट के भएको छ मलाई केही थाहा छैन । म confuse मा थिए उनी लिप्त छिन तर म प्रती कि अरु कोहि । अनि समयको गति संगसंगै हाम्रो बोली लम्बिदै जान थाल्यो । म मायालाई जोड दिन्थे तर उ कुराहरु सुन्थी ।
केही चासो थिएन म प्रती तर थियो त अरु कोहिको । अन्ततः पुन हामी बिच बोली बन्द हुन थाल्यो किनकी उनी अरुमै रमाइरहिकी थिइन । मसंग बोल्नु अघि भनेकी थिइ I hate being in relation !!! केही समय मलाई बिर्सन गाह्रो भयो । रक्सीको सहायता पनि लिए तर अह सक्दै सकिन ।
केही दिन पछि मलाई अलिक शान्त मिल्यो । बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिदै गए । अनि अन्ततः अब कहिल्यै सम्झिन्न होला भन्ने mood मा पुगे । अनि एकदिन म यत्तिकै बसिरहेको थिए । अचानक एउटाको मुखबाट आवाज सुन्न पुगे । त्यो केटीको त बिनोदसंग चक्कर चलेको छ रे नि । अनि अचम्म त त्यति बेला परे जुन बेला केटीको नाम I hate being in love वाला dialogue भनेर गएकी थिई । फेरि त्यही नाम सुन्न नपरोस भनेको थिए जबरजस्त सुन्न पर्यो । अनि बिस्तारै अतितमा पुगे र सोच्न थाले, ” सायद उनी अझै मेरी हुन्थिन् भने ……….
लेखक – विशाल न्यौपाने
Follow writer on facebook click here ©xtbisu; fb/insta/twitter: @xtbisu
About Admin	95 Articles
42 Little Known Facts about India
एक नाैलाे कथा　::
बुबा : : Ritesh GrG
एक वर्षभित्र काठमाडौँलाई धूम्रपानरहित बनाइने
Srijanaka Thunga Haru – सृजनाका थुङ्गाहरु(Nepali Gajal)
कथा : : मेरो अधुरो कहानी (भाग १)
Must Read-यत्रो पढेको साला ५ हजारको लागि हो ?
20 Horror Movie Facts That Are Scarier Than The Movies They’re About
सन्ध्या ” एक अधुरो प्रेम कहानी “